Ukubhala Akuncanci, kufuna nje ukuziQhelanisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Julayi 5, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Umfazi womhlobo wam osenyongweni, UWendy Russell, ungumvelisi kamabonakude nombhali. Wayebambe uthotho oluphumeleleyo kwi-HGTV ebizwa ngokuba liQhinga. Siye saba ngabahlobo abalungileyo phantse iminyaka engama-20 ngoku kwaye bendisoyika italente yakhe yoyilo kwaye ndiqhuba kule minyaka idlulileyo.
Ngokwam, andizicingeli njengoyilo okanye umbhali. Kodwa yonke imihla ndizifumana ndiza nezisombululo ezizodwa kwaye ndithatha ixesha ukubhala iposti yebhlog. Nangona ndingumbhali opapashiweyo, andizicingi njengombhali. Mhlawumbi kukupela amagama kakubi kunye neempazamo zegrama eziqhuba ukucinga kwam.
Phantse yonke imihla, ndibona esi sibhengezo sihamba kuFacebook kwaye siyandikhathaza qho xa ndisibona.
Andicingi ukubhala kuyabila, kwaye andikholelwa kunzima ukubhala. Into endiyifundileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo kukuba ukubhala kufuna nje ukuzinikezela kunye nokuzilolonga.
Andikhuthazeki kwimisebenzi emininzi-kodwa ukubhala yenye yezo zinto indigcina ebusuku. Xa ndingenayo iposti yebhlog, ndibanexesha elinzima lokugxila kwezinye izinto eziphambili. Amaxesha amaninzi, ndiza kusebenza usuku lonke kwizithuba ezininzi ukuze ndikwazi ukugxila komnye umsebenzi kwezi ntsuku zimbalwa zizayo.
Wendy is Umbhali, ndiye ndambuza ukuba kunzima kangakanani kuye ngamanye amaxesha ukubhala. Uye wathi bekuhlala kunzima de afunde le ncwadi Indlela yomculi. UWendy uthe incwadi kaJulia Cameron inefuthe elikhulu ekubhaleni kwakhe-nakwikhondo lakhe lomsebenzi. Kangangokuba, kwiminyaka kamva, uWendy wathatha iworkshop noNks.Cameron wambulela ngesiqu.
AmazonNgomgaqo osisiseko wokuba intetho yoyilo sisikhokelo sendalo sobomi, uJulia Cameron kunye noMark Bryan bakukhokele kwinkqubo yeeveki ezilishumi elinambini yokubuyisa ubuchule bakho kwiibhloko ezahlukeneyo, kubandakanya umda iinkolelo, uloyiko, ukuzenzakalisa, umona , ukuziva unetyala, ukuba likhoboka lotywala, kunye nezinye izinto ezinokukuthintela, ukubuyisela ukuzithemba kwezobugcisa kunye nemveliso.
UJulia Cameron ukholelwa ekubeni wonke umntu uyile kwaye wonke umntu unakho ukubhala. Emva kweminyaka elishumi yokubhala, ndikholelwa okufanayo. Ukubhala akunzima kwakhona. Kwaye ukubhala akuncancisi. Ukuba unethemba lokuba ngumthengisi omkhulu, ndiyakholelwa ukuba kufuneka ube ngumbhali omkhulu. Mhlawumbi i-Artist's Way yinkqubo yakho (lelo likhonkco lam lokudibanisa elibandakanyiweyo)!
Jul 6, 2013 ngo-2: 46 AM
Ewe unyanisile ndiyavumelana nawe !!
Igama loqhagamshelwano Kennedy
Jul 9, 2013 ngo-10: 00 PM
Andikwazi tu ukuvumelana nawe. Ndenze okuninzi ebomini bam; iokhestra kunye nokwakheka, ubugcisa obubonwayo, imibongo, ulawulo, kunye nokubhala iprozi kuye kwaba yeyona nto inzima ukuba ndiyenze. Esona sizathu siphambili kuxa usebenza nomhleli okanye nabanye ababhali apho amagama akho, kulungile, ahleliwe, uqobo lwayo luyawa ngaphandle kuhlelo.
Ndikhonze ngaphezulu kwamagama angama-500 ixesha elide kwaye ndigxininisa ngakumbi kunokuba ndenze ukufumana isiqwenga somculo, umbongo okanye ubugcisa obubonwayo ngokuchanekileyo. Kwaye ndiye ndafumana uqeqesho olungaphezulu kakhulu njengombhali, hee, mhlawumbi yingxaki leyo.
Ukubhala ngokuchanekileyo, kuyeyona nto inzima ebomini bam.
Mar 21, 2017 ngo-2: 59 AM
Andikhathali nokuba utheni uRob kennedy, ndivumelana ngokupheleleyo nawe. Kuba ngaphandle kokufunda incwadi akunakwenzeka ukuba uqokelele ulwazi kwaye ube ngumbhali olungileyo. Enkosi ngeposi yakho efanelekileyo